Genesisi 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Pakutanga+ Mwari+ akasika+ matenga nenyika.+ 2 Zvino nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu, rima rakanga riri pamusoro pemvura yakadzika;+ uye simba raMwari rinoita basa raifamba-famba+ pamusoro pemvura.+ 3 Mwari akatanga kuti:+ “Chiedza ngachivepo,” chiedza chikavapo.+ 4 Pashure Mwari akaona kuti chiedza chakanga chakanaka, uye Mwari akaparadzanisa chiedza nerima.+ 5 Mwari akabva atumidza chiedza kuti Masikati,+ asi rima akaritumidza kuti Usiku.+ Manheru akavapo nemangwanani akavapo, zuva rokutanga. 6 Mwari akabva ati: “Nzvimbo huru+ ngaivepo pakati pemvura uye mvura ngaiparadzane nemvura.”+ 7 Mwari akatanga kuita nzvimbo huru, akaparadzanisa mvura inofanira kuva pasi penzvimbo yacho huru nemvura inofanira kuva pamusoro penzvimbo yacho huru.+ Uye zvakaita saizvozvo. 8 Mwari akatumidza nzvimbo yacho huru kuti Denga.+ Manheru akavapo nemangwanani akavapo, zuva rechipiri. 9 Mwari akabva ati: “Mvura iri pasi pematenga ngaiungane munzvimbo imwe uye nyika yakaoma ngaioneke.”+ Uye zvakaita saizvozvo. 10 Mwari akatumidza pasi pakaoma kuti Nyika,+ asi mvura yakaungana akaitumidza kuti Makungwa.+ Uyezve, Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.+ 11 Mwari akabva ati: “Nyika ngaimerese uswa, zvinomera zvinobereka mbeu,+ miti yemichero inobereka michero maererano nemarudzi ayo,+ mbeu dzayo dziri mukati mayo+ panyika.” Uye zvakaita saizvozvo. 12 Zvino nyika yakatanga kumera uswa, zvinomera zvinobereka mbeu maererano nemarudzi azvo+ nemiti inobereka michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo maererano nemarudzi ayo.+ Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka. 13 Manheru akavapo nemangwanani akavapo, zuva rechitatu. 14 Mwari akabva ati: “Zvinovheneka ngazvive munzvimbo huru yematenga kuti zviparadzanise masikati nousiku;+ zvichava zviratidzo uye zvicharatidza mwaka, mazuva nemakore.+ 15 Zvichava zvinovheneka munzvimbo huru yematenga kuti zvivhenekere nyika.”+ Uye zvakaita saizvozvo. 16 Mwari akatanga kuita zvinovheneka zvikuru zviviri, chinovheneka chikuru kwazvo kuti chitonge masikati nechinovheneka chiduku kuti chitonge usiku, uyewo nyeredzi.+ 17 Nokudaro Mwari akazviisa munzvimbo huru yematenga kuti zvivhenekere nyika,+ 18 uye kuti zvitonge masikati nousiku nokuparadzanisa chiedza nerima.+ Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka.+ 19 Manheru akavapo nemangwanani akavapo, zuva rechina. 20 Mwari akabva ati: “Mvura ngaizare nemweya mipenyu mizhinji+ uye zvisikwa zvinobhururuka ngazvibhururuke pamusoro penyika pakatarisana nenzvimbo huru yematenga.”+ 21 Mwari akatanga kusika mhuka huru dzomugungwa+ nemweya yose mipenyu inofamba-famba,+ zvikazara mumvura maererano nemarudzi azvo, nezvisikwa zvose zvine mapapiro zvinobhururuka maererano nemarudzi azvo.+ Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka. 22 Naizvozvo Mwari akazvikomborera, achiti: “Berekai, muwande, muzadze mvura iri mumakungwa,+ uye zvisikwa zvinobhururuka ngazviwande panyika.” 23 Manheru akavapo nemangwanani akavapo, zuva rechishanu. 24 Mwari akabva ati: “Nyika+ ngaibudise mweya mipenyu maererano nemarudzi ayo, zvipfuwo+ nezvinokambaira+ nemhuka dzomusango+ dzenyika maererano nemarudzi azvo.” Uye zvakaita saizvozvo. 25 Mwari akatanga kuita mhuka dzomusango dzenyika maererano nemarudzi adzo nezvipfuwo maererano nemarudzi azvo nezvinokambaira zvose zvenyika maererano nemarudzi azvo.+ Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka. 26 Mwari akabva ati: “Ngatiite+ munhu nomufananidzo wedu,+ akafanana nesu,+ uye ngavave nesimba pahove dzegungwa nepazvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nepazvipfuwo nenyika yose nepazvose zvinokambaira zvinofamba panyika.”+ 27 Mwari akatanga kusika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari;+ akavasika munhurume nomunhukadzi.+ 28 Uyezve, Mwari akavakomborera,+ Mwari akati kwavari: “Berekai+ muwande, muzadze nyika, muikurire,+ muve nesimba+ pahove dzegungwa nepazvisikwa zvinobhururuka zvokumatenga nepazvisikwa zvose zvipenyu zvinofamba panyika.” 29 Mwari akabva ati: “Tarirai ndakupai zvinomera zvose zvinobereka mbeu zviri panyika yose nemiti yose ine michero yemiti inobereka mbeu.+ Ngazvive zvokudya zvenyu.+ 30 Mhuka dzose dzomusango dzenyika nezvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga nezvinhu zvose zvinofamba panyika zvine upenyu mazviri semweya, ndazvipa zvinomera zvose zvakasvibirira kuti zvive zvokudya zvazvo.”+ Uye zvakaita saizvozvo. 31 Pashure Mwari akaona zvinhu zvose zvaakanga aita uye, tarira! zvakanga zvakanaka kwazvo.+ Manheru akavapo nemangwanani akavapo, zuva rechitanhatu.